Viber gụnyere nkwado maka GIF na nkwado ndabere ozi na 6.1 | Gam akporosis
Viber na-emelite na 6.1 na nkwado maka gifs, ndabere nke ozi akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ
Site na Viber, n'agbanyeghị na m dị ka otu ngwa ngwa izi ozi kachasị na mbara ala dị ka anyị nwere ike ịmata n'oge na-adịbeghị anya, anyị enweghị ozi buru ibu dịka ha si abịa na Telegram, WhatsApp ma ọ bụ Facebook Messenger. Agbanyeghị, anyị na-eche ihu na ngwa na-aga n'ihu na-enweta mmelite.
Ugbu a, a gbanwere Viver na mbipute 6.1 na ọtụtụ atụmatụ dị mkpa na ndozi na gam akporo na iOS gị. Mmelite ahụ na-enweta nkwado maka GIF ndị na-eme egwuregwu ma na-enye gị ohere ịme ndabere nke akụkọ nkata gị. Ozi abụọ dị oke mkpa nke ọtụtụ ngwa nwere, ọ bụ ezie na nkwado nke GIF maka WhatsApp abịabeghị.
Ka anyị na-enwe olile anya na oge ụfọdụ ụmụ okorobịa si WhatsApp kpebiri iweta nkwado maka gifs ndị na-eme egwuregwu na ngwa izipu ozi kachasị na mbara ala, ugbu a ọ bụ Viber na abịa n'ihu na nkwado maka usoro a nke faịlụ ka e wee ziga ha, nata ma lelee ha n'otu mkparịta ụka.
Ọzọ ọzọ oké nhọrọ na Viber version 6.1 bụ ikike na-eme nkwado ndabere ma ọ bụ ndabere niile ozi akụkọ ihe mere eme na iCloud ma ọ bụ Google mbanye. Dị ka ego, ịnwere ike iweghachite ozi nkata ndị ahụ na nọmba ekwentị ahụ, ọbụlagodi ma ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ọhụrụ. Iji tozuo maka nkwado ndabere, ị ga-aga n'ihu "karịa" ma họrọ Ntọala> Viber ndabere> họrọ nkwado ndabere. Ọ bụrụ na ịchọrọ iweghachi ozi, ị ga-ahọrọ ya site na ntọala n'onwe ha.
Banyere gifs, Viber desktọọ mbipute nkwado Ọ bụ n'ụzọ ya dị ka ụlọ ọrụ n'onwe ya kwupụtara site na blog post. Gfọdụ gifs ndị na-ejikwa mkparịta ụka na-akpali akpali dị ka ọtụtụ n'ime unu ga-ahụ na Telegram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Viber na-emelite na 6.1 na nkwado maka gifs, ndabere nke ozi akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ
Ndị nnata TenGO Wi-Fi ma ọ bụ otu esi enyo TV na-enweghị rawụta dị nso